IOstreliya ithumela imikhosi kwiiSolomon Islands emva kodushe olunogonyamelo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeSolomon Islands eziQhekezayo » IOstreliya ithumela imikhosi kwiiSolomon Islands emva kodushe olunogonyamelo
Iindaba zase-Australia eziQhekezayo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Iindaba zeSolomon Islands eziQhekezayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Uqhanqalazo lunxulunyaniswa nenani leengxaki zasekhaya- mhlawumbi eyona iphambili phakathi kwazo sisigqibo sikarhulumente kaSolomon ngo-2019 sokuqhawula ubudlelwane bezozakuzo kunye neTaiwan ngokuthanda iChina.
Inkulumbuso yaseOstreliya Scott Morrison ubhengeze ukuba iAustralia ithumele amapolisa, kunye namajoni kwi Isiqithi saseSolomon ngeenzame zokuthintela udushe olunobundlobongela.
Ngokutsho Usosiba jikelele, Amagosa amapolisa e-75 ase-Australian federal, amajoni e-43 kunye nabadiplomate abahlanu ubuncinane baya kwiziqithi "ukubonelela ngozinzo kunye nokhuseleko" kunye nokunceda amagunya asekuhlaleni ukuba agade iziseko ezibalulekileyo.
Uthumo lwabo kulindeleke ukuba luthathe iiveki ezininzi, kwaye luza phakathi kwezidubedube ezikhulayo, nabaqhankqalazi mva nje bezama ukugqogqa ipalamente kazwelonke.
Uqhanqalazo olwayanyaniswa nenani leengxaki zasekhaya - mhlawumbi eyona iphambili phakathi kwazo sisigqibo sikarhulumente kaSolomon ngo-2019 sokuqhawula ubudlelwane bezozakuzo kunye neTaiwan ngokuthanda iTshayina, ethatha iTaiwan njengenxalenye yommandla wayo.
Morrison wagxininisa ukuba “asiyonjongo karhulumente waseOstreliya nangayiphi na indlela ukungenelela kwimicimbi yangaphakathi yelizwe. Isiqithi saseSolomon,” wongezelela ngelithi ukuthunyelwa komsebenzi “akubonisi nakuphi na ukuma kwimiba yangaphakathi” yesizwe.
Inkulumbuso yeziqithi, uManasseh Sogavare, ubhengeze ukuvalwa kweeyure ezingama-36 ngolwesiThathu kulandela uqhanqalazo olukhulu kwikomkhulu laseHoniara, apho abaqhankqalazi bafuna ukuba arhoxe. Ngaxa lithile, abaqhankqalazi bade bazama ukugqogqa kwisakhiwo sepalamente, kwaye kamva bavutha umlilo kwindlwana ekufuphi ngqo nendlu yowiso-mthetho.
Iivenkile kunye nezinye izakhiwo kwisithili saseChinatown nazo zaphangwa kwaye zatshiswa, ngaphandle kokuvalwa okuqhubekayo kunye nemiyalelo yokubuya ekhaya. Ukutshatyalaliswa kwabanjwa kwimifanekiso ejikelezayo kwi-intanethi, kunye nezakhiwo ezonakalisiweyo neziqhumayo zibonwa phakathi kolwandle lwenkunkuma.
NgoLwesihlanu, xa abasebenzi base-Australia bafikayo, i-PM yafaka uqhanqalazo kumazwe angaphandle angachazwanga, isithi abaqhankqalazi "bondliwe ngobuxoki nangabom" malunga nobudlelwane beziqithi kunye neBeijing.
“Kwala mazwe aphembelelayo ngoku [abaqhankqalazi] ngala mazwe angafuni budlelwane nePeople’s Republic of China, kwaye ayadimaza iiSolomon Islands ukuba zingene kubudlelwane bozakuzo,” utshilo uSogavare, nangona enqabile ukukhankanya nawaphi na. isizwe esithile.